Waa Kuwan Sawirada Maxaabiistii Boosaaso Ka Baxsatay | Xaqiiqonews
Waa Kuwan Sawirada Maxaabiistii Boosaaso Ka Baxsatay
Dagaal sababay baxsashada maxaabiista xabsigii dhexe ee Boosaaso ayey Al-shabaab ku qaadeen xabsiga dhexe ee magaalada Boosaaso halkaasi oo ku xirnaayeen maxaabiis lagu sheegay in ka badan 500 oo qof.
Dagaalka Boosaaso oo dhacay saqdii dhexe ee habeenkii jimcada ayaa xaalad amni oo kacsanaan ah ka abuuray deegaanada Puntland.
Puntland oo dagaalka ka hadashay waxa ay carabka ku dhufatay in maxaabiitii qaar firxadeen inta dagaalka socday, laguna daba jiro qaarna la soo qaabtay, halka qoraal ay Al-shabaab baahiyeen ku sheegeen in ay xoog ku soo furteen maxaabiis ay ku sheegeen 400 maxbuus.
Sidoo kale Aqri: Xogta iyo Qabiilada..Madaxda Al-shabaab ee Xayiraadda La Saaray
Shabakadda Xaqiiqonews oo baaritaan saameysay ayaaa heshay sawirrada qaar ka mid ah maxaabiistii Al-shabaab ee Bosaaso, kuwaasi oo sida ay xogta hoose sheegeyso ka baxsaday xabsigii dhexe.
Maxaabiista baxsatay ayaa u badnaa dagaalyahanno Al-shabaab ka tirsan kuwaasi oo ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya, raggaasi oo Puntland ay gacanta ku dhigtay dagaal ka dhacay gobolka Nugaal sanadkii 2016
qaar ka mid ah maxaabiistii Al-shabaab ee ku xirnaa xabsiga Boosaaso, sawirka sanado ka hor ayaa la qaaday